Nnwom 119 NA-TWI - Awurade mmara - Nhyira nka wɔn a wɔn - Bible Gateway
Nnwom 118Nnwom 120
Nnwom 119 Nkwa Asem (NA-TWI)
119 Nhyira nka wɔn a wɔn asetena yɛ pɛ, na wodi Awurade mmara so. 2 Nhyira nka wɔn a wofi wɔn koma nyinaa mu di n’ahyɛde so. 3 Wɔnyɛɛ mfomso. Wɔnam Awurade akwan so. 4 Awurade, wo na wohyɛɛ mmara maa yɛn na wokae se yɛnni so nokwarem. 5 Mewɔ anidaso yiye sɛ medi w’asɛm so. 6 Sɛ meyɛ aso ma w’ahyɛde a, m’anim rengu ase.